AMSTERDAM: Tababar ay bixisay Himilo ayaa looga hadlay caqabadaha ay wajahaan waalidiinta ajnabiga ah [SAWIRRO] - Somnieuws.com
Ururka Himilo oo ka mid ah ururada Soomaalida ee ka dhisan Magaalada Amsterdam ee dalka Nederland, ayaa maanta ku qabtay Magaaladaasi lugtii 1-aad ee tababar looga hadlayay kala duwanaanshiyaha dhaqamada & kaalinta waalidku ku leeyahay ku barbaarinta caruurta 2 dhaqan.
Kulankan oo xiisa gaar ah xambaarsanaa, waxaa xiriirinayay C/shakuur Xalane & C/kariin Maxamuud [Lafoole], waxayna ka qeybgalayaasha hordhigeen su’aalo ku saabsan sida xal loogu heli karo waxyaabaha inta badan loo arko in ay fashil u horseedaan caruurta & dhalinyarada ajnabiga ah ee dalkaasi ku dhaqan iyo sida ay waalidiintu u wajahaan xal ka gaarista arrimaha taabanaya mustaqbalka caruurtooda, iyada oo sidoo kale la soo qaaday sida ay qolo kasta u wajahdo marka qof mushtamacooda ka mid ah ay dhibaato ku timaado.
Ka soo qeybgalayaasha kulanka, oo isugu jiray Masaari, Suudaan & Soomaali, ayaa aragtiyo isku dhow ka muujiyay qoddobo dhowr ah oo laga hadlay, waxaanna arrimaha sida weyn loo gorfeeyey ka mid ahaa; in caruurta/dhalinyarada ka dayoobaan dariiqa saxda ah marka waalidku kala tagaan; Sidoo kale qoddobada la is dultaagay waxaa ka mid ahaa; marka waalidiintu ay ku arkaan caruurtooda isbeddelo ay bii’adu keento in durba aysan si caro leh uga fal-celin, ayna hagaajiyaan xiriirka kala dhexeeya caruurtooda si ay u kasbadaan quluubtooda.
“Haddii aad timaado guri qof kale leeyahay dabcan waxaad ku qabsan tahay inaad u hogaansanto shuruucda gurigaasi lagaga dhaqmo inta aad guriga joogtid. Annagu haddii aan Soomaali nahay waxaa suurtagal ah inaan la kulano wax aynaan dhaqan & diin u laheyn, haddana waxaan ku qabsanahay inaan ixtiraamno sida qolo kasta ay u noolaaneyso, waajibka kaliya ee ina saaranna uu yahay siddeen wax ula qabsan karnaa mushtamacan annaga oo haysana dhaqankeena & diinteena” Ayuu yiri Cabdishakuur Xalane oo ah aabaha 5 caruur ah, isagoo xusay in dalkan uu ku yimid 15 jir, uuna ku noolaa muddo 30 sanno ah.
C/shakuur Xalane & C/kariin oo barnaamijka daadihinayay ayaa fursad u siiyay ka qeybgalayaasha in ay is-dhaafsadaan qibradaha & waaya-aragnimada ay nolosha ka dhaxleen.
“Dalalka aan ka nimid aabayaashu waxaa suurtagal ah marka ay xaaskoodu dhalayso in ay bannaanka ka joogaan qolka ay ku dhalayso, dalkan waxaa shardi ah in aabe kasta uu kor taagan yahay xaaskiisa marka ay dhaleyso, haddii kale waxeey u muuqaneysaa wax naadir ah oo aan dhici karin, ragga qaarkood sideey ayeey arrintaasi u saameyneysoaa noloshooda” Ayuu yiri Cabdikariin oo su’aashaasi hordhigaty qaar ka mid ah ka qeybgalayaasha.
Kulankaasi waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa Guddoomiyaha ururka Himilo Cali Istiila, waxaanna la filayaa in wejigiisa 2-aad uu qabsoomo bartamaha bisha Luuliyo ee sannadkan.